Gudoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya oo Cadaado Gaaray – Radio Daljir
Gudoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya oo Cadaado Gaaray
Juunyo 22, 2015 11:43 b 0
Isniin, Juun 22, 2015 (Daljir)_Gudoomiyaha barlamaanka Jamhuuriyada federalka ah ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo wafti ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta lagu soodhoweeyey degmada Cadaado ee xarunta maamulka Ximan iyo Xeeb ee gobolka Galgaduud.
Gudoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa safarkiisa degmada Cadaado ku weheliyey kudhowaad 30 katirsan mudanayaasha barlamaanka Soomaaliya, wasiiro iyo sidoo kale xubno isugu jirey siyaasiyiin iyo ururada bulshada magaalada Muqdisho.
Xubno katirsan madaxda maamulka Ximan iyo Xeeb siyaasiyiinta ku shirsan magaalada Cadaado iyo dadweynaha degmadaasi ayaa waftiga gudoomiyaha barlamaanka kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee Cadaado kahor inta aan loogudbin halka uu kasocdo shirka Cadaado.
Ujeedada ugu weyn ee waftigaan uu hogaaminayo gudoomiyaha barlamaanka Soomaaliya ayaa lasheegayaa inay tahay sidii ay uga qaybgeli lahaayeen dhamaystirka dhismaha maamulkaasi oo habka dhismihiisa loomaray kasoo horjeedo heshiisyadii horay udhexmaray Puntland iyo dowladda Federalka ah ee Soomaaliya.
Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka Jubbaland ayaa kasoo horjeestay sharci ahaanshaha maamulkaasi oo aan waafaqsanayn dastuurka Jmahuuriyadda Soomaaliya iyo heshiisyadii ay horay ugaleen dowladda federalka ah iyo dowladda Puntland.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda maamulada qaybta ka ah dowlada federalka ah ayaa horay heshiis ugu gaarey magaalada Garoowe ee xarunta dowladda Puntland , waxaana Madaxweynuhu markuu ku laabtay Muqdisho sheegay in heshiiskaasi dheeldheel ahaa.
Madaxweyne Xasan oo Soo Dhaweeyay in Dib loo Fasaxay Xawaaladihii Somaalida ee Kenya
DHAGAYSO: Hawlgalo Amni sugid ah oo ka socda Magaalada Garoowe